ယောဟန်အောင်: ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအကြောင်း၊ (အပိုင်း-၁၁)
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ (Silkworm Books) စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေပြီး၊ ဘင်နဒစ် ရော်ဂျာစ် (Benedict Rogers) ရေးသားထားတဲ့ "ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မင်းဆိုးမင်းညစ်တဦးကို မျက်နှာဖုံးခွာကြည့်ခြင်း" ဆိုတဲ့ စာအုပ်အကြောင်းကို တင်ဆက်နေပါတယ်။ ဒီတပတ်မှာတော့ ပြည့်ရှင်မင်းတရားတဦးလို ပြုမူနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ရာ နိုင်ငံ တော် စီမံကိန်းကြီးတွေအကြောင်း ကို ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့ မိသားစုအကြောင်း သတင်းဇာတ်လမ်းတွေက မယုံကြည် နိုင်လောက်စရာ ထူးထွေဆန်းပြားလှပါတယ်။ သူတို့အကြောင်း တကယ့်ကို အံ့သြမခန်း သတင်းတွေလည်း ကြားရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသတင်းတွေကို အတည်ပြု နိုင်ဖို့ ခက်သလို၊ တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောဖို့ခက်လှပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ မိသားစုက ချမ်းသာကြွယ်ဝလွန်း တဲ့ အချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကတော့ ဆင်းရဲနေပါတယ်။ ဒီလို ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေ ဓနဥစ္စာတွေက ဘယ်က ရရှိလာသလဲလို့ စာရေးသူ ဘင် ရော်ဂျာက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက အချို့အစီရင်ခံစာတွေ၊ စာအုပ်တွေကို ကိုးကားပြီး ဒီဝင်ငွေတွေက မူးယစ်ဆေး ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ငွေတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ တခါက ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့ မြေး နေရွှေသွေးအောင်ရယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်သား အောင်ဇော်ရဲမြင့်က လူကြီးသားတွေ ရမ်းကားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အရေးယူမခံရဘဲ မူးယစ်ဆေးဝါး တင်သွင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ အမှုနဲ့ စီးပွားရေးသမား မောင်ဝိတ်က ကြားထဲက ထောင် ၂၅-နှစ် ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို လူကြီးသားတွေကိုယ်တိုင် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စတွေ ပတ်သက်နေတာရယ်၊ နောက်တခုက နိုင်ငံတကာမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ကျော်စောနေတဲ့ အုပ်စု အေးရှားဝေါလ်အုပ်စုက ဆက်ပြီး ရှင်သန်ကြီးထွားနေခွင့်ရတာ အာဏာပိုင်တွေက မူးယစ်ဆေးကုန်သွယ်မှုကိစ္စတွေ၊ ငွေမဲ ငွေဖြူလုပ်နေတာတွေကို မျက်စေ့မှိတ် ခွင့်ပြု ထားလို့ပဲလို့ သူက သုံးသပ်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် မြန်မာပြည်အကြောင်း လေ့လာနေသူ ဘာတေးလ် လင့်တနာ ကလည်း အခုဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ "မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ်မှုကို နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု အဖြစ် လုပ် နေတာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာပဲ ရှိတယ်" ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါတွေသာ မက မက်ဆာချူးဆက်တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ ဂျာလား အလမ်ဂါး (Jalal Alamgir) ရဲ့ သုံးသပ်မှု တခုမှာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဟာ ၅၀% ကျော်လောက်က မူးယစ်ဆေးဝါးက ငွေတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတယ်ဆိုပြီး သုံးသပ်ထားတာကိုလည်း စာရေးဆရာ က ကိုးကားလို့ ဖော်ပြပါတယ်။
နောက်တခု ၀င်ငွေရပေါက်ကတော့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရောင်းချရငွေကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ နှစ်လယ်ပိုင်းက စလို့ မုတ္တမကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်က သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ စတင်တွေ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်က ရတနာဓာတ်ငွေ့သိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ စစ်အစိုးရအတွက် တနှစ်ကို ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀၀ လောက် ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ သြစတြေလျနိုင်ငံ အခြေစိုက် Burma Economic Watch က မြန်မာ ပြည် စီးပွားရေးအကြောင်း လေ့လာနေသူ ပညာရှင် ရှောင်တာနဲက ဖော်ပြတာက အဲဒီသဘာဝဓာတ်ငွေ့က ရတဲ့ ၀င်ငွေ တွေကို ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းအင်းတွေထဲ ထည့်ဖော်ပြတာ မတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘဏ္ဍာရေး စရင်းအင်းထဲ ၀င်တယ်ဆိုရင်တောင် တဒေါ်လာကို ၆ ကျပ်နဲ့ တွက်ချက်ပြီး ထည့်သွင်းတာပါ။ အဲသည်တော့ တကယ်နိုင်ငံက ရရှိရမယ့် ဘဏ္ဍာ တော်ရဲ့ ၀. ၅% လောက်ပဲ ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် ရောက်လာပြီး၊ ကျန်တဲ့ ၉၅. ၅% က ပျောက်သွားရတဲ့ အနေအထား ပါ။ ဒီလို ဘဏ္ဍာဝင်ငွေတွေကို ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက "နိုင်ငံတော် အထူးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ" ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ စာရေးသူ ဘင်ရော်ဂျာကတော့ ဒီလို ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချရာက ၀င်ငွေတွေနဲ့ ကြွယ်ဝနေ တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် အခုကာလမှာ ရေအားလျှပ်စစ် ရှာဖွေထုတ်လုပ်တဲ့ စီမံချက်ကြီး တွေကိုလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ အကြီးအကျယ် ဆောင်ရွက်နေပါသေးတယ်။ ဒီလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်း ၀င်ငွေ အမြောက်အများ ရရှိမှာ မလွဲပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုစီမံချက်ကြီးတွေ နောက်ကွယ်မှာ နစ်နာရသူ ပြည်သူတွေ အမြောက်အများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဘင် ရော်ဂျာက အစီရင်ခံစာ အကိုးအကားတွေနဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။ ရတနာ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတုန်းက အဓမ္မ လုပ်အားပေးခဲ့ရသူတွေ၊ အိမ်ယာစွန့်ပစ် ထွက်ပြေးရသူတွေ၊ အခြားနစ်နာရသူတွေ အများအပြားပါ။ ဆည်တွေ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြီးတွေ ဆောက်တော့လည်း အလားတူပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကြရ ပြန်ပါတယ်။ စာရေးသူ ဘင်ရော်ဂျာက တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ဖူး တဲ့သူ မာ့က် ကန်းနင်း (Mark Kanning) နဲ့လည်း တွေ့ဆုံလို့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအကြောင်း မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ တာကို ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ မာ့က် ကန်းနင်းအဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေဟာ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ကြီးတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို သိပ်ပြီး စိတ်ထက်သန်တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ သူက နိုင်ငံကို အခုလို စုစည်းနိုင်တာ၊ သူ့အမြင်မှာ နိုင်ငံကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုပြီး အင်မတန် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တံတာတွေ၊ ဆည်တွေကိစ္စကို သူက သိပ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တကယ့်စွမ်းဆောင်မှုကြီးလို့ ထင်နေဟန် ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အချို့လုပ်ငန်းတွေက ပြည်သူတွေကို တစုံတရာ အကျိုးရှိစေမှာတော့ မလွဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေ ဒုက္ခကြုံရ တဲ့ စီမံကိန်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နေကြာဆိုတော့လည်း စိုက်လိုက်ရ၊ ကြက်ဆူဆိုတော့လည်း တပြည်လုံးမနေရ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ ကြက်ဆူဆိုတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန့်ကျင်နိုင်ဖို့ ကက်ကင်းသဘော 'စုကြည်' - 'ကြက်ဆူ' ဆိုပြီး ဗေဒင်ဆရာတွေရဲ့ အကြံဉာဏ်နဲ့ စိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ သတင်း တွေရတယ်ဆိုပြီး၊ ဘင်ရော်ဂျာက ထည့်ပြီး ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလို ယတြာချေတယ်ဆိုပေမယ့် တိုင်း/ ပြည်နယ်တွေတိုင်းမှာ ဧကသိန်းကျော် မစိုက်မနေရ စိုက်ကြ ရတာပါ။ ဒီလိုစိုက်ကြရလို့ စီးပွားပျက်ရသူတွေ၊ အိုးအိမ်စွန့်ပစ်ပေးရသူတွေ၊ အဓမ္မလုပ်အားပေးကြရသူတွေ မနည်းပါဘူး။ အခုတော့လည်း အဲသည်ကြက်ဆူ တွေ ဘယ်နေရာ အသုံးချနေမှန်း မသိရပါဘူး။ အဲသည်လို အဟောသိကံဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စ တွေမှာ ရေနက်ကွင်း စီမံကိန်းတွေလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ တက်စမှာ အကြီးအကျယ် ရေနက်ကွင်းစပါးကိစ္စ တွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်တော့ပြီးပြီးပျောက်ပျောက် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ အဲသည် ရေနက်ကွင်း ကိစ္စတွေ တော့ ဘင်ရော်ဂျာရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအကြောင်း စာအုပ်ထဲမှာ ထည့်ဖော်ပြထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
အခုအချိန်မှာ စစ်အစိုးရ ၀င်ငွေများလာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့စိတ်ထင်ရာ စီမံကိန်းကြီးတွေ လုပ်နေနိုင်ပါပြီ။ နေပြည်တော် မြို့တော်သစ်ကြီး တည်ဆောက်တဲ့ လုပ်ငန်းက အဓိကထင်ရှားတဲ့ သာဓကပါ။ နောက်တော့ စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်တွေ အတွက် မြေအောက်ဥမင်တွေ ဆောက်နေတာ၊ အဏုမြူစီမံကိန်းတွေလုပ်နေတာက အတော့်ကို ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ စီမံကိန်းတွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကို လာတိုက်ခိုက်မယ့် ပြင်ပရန်က တကယ် ရှိနေသလား။ အဏုမြူစီမံကိန်းကြီးရဲ့ အောင်မြင် နိုင်တဲ့ အလားအလာက ဘယ်လိုရှိသလဲ။ ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို ဘယ်သူကမှ ထုတ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစီမံကိန်း ကြီးတွေကြောင့် ပြည်သူတွေ မွဲတေဒုက္ခ ရောက်ကြ ရသလို၊ စီမံချက်ကြီးတွေကြောင့် အမြတ်ထွက်ရသူ လူနည်းစုတွေ လည်း ရှိနေကြပါတယ်။
နောက်တပတ်မှာတော့ စစ်အစိုးရကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ထောက်ခံမှုရအောင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံ အကြောင်းတွေ ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင် ကြပါစေ။
Posted by Yaw Han Aung at 10:01 AM